ဝီရိယမှာ ဆရာတဆူဖြစ်နေသေးတဲ့ ရိုနယ်ဒို ၊ နယူးကာဆယ် နဲ့ အသံထွက်လာတဲ့ စတား ၂ ယောက် ၊ ဘိုင်ယန်ကို နောက်ကောက်ချနိုင်ခဲ့တဲ့ ဘာဆာ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ဝီရိယမှာ ဆရာတဆူဖြစ်နေသေးတဲ့ ရိုနယ်ဒို ၊ နယူးကာဆယ် နဲ့ အသံထွက်လာတဲ့ စတား ၂ ယောက် ၊ ဘိုင်ယန်ကို နောက်ကောက်ချနိုင်ခဲ့တဲ့ ဘာဆာ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
March 9, 2022 - by Editor
ယမန်နေ့ ညက ကစားခဲ့ကြတဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ၁၆ သင်းဆင့် ဒုတိယအကျော့ ပွဲတွေမှာတော့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဟာ အိမ်ကွင်းမှာ ရက်ဘူး ဆဲဘတ် အသင်းကို ၇-၁ နဲ့ ဂိုးမိုးရွာ အနိုင်ကစားပြီး နှစ်ကျော့ပေါင်း ၈-၂ ရလဒ် နဲ့ နောက်တဆင့်ကို တက်လှမ်းသွားခဲ့ ပါတယ် ။
လီဗာပူး ကတော့ အိမ်ကွင်း အန်ဖီးလ်မှာ အင်တာမီလန် ကို ၁-၀ နဲ့ ရှုံးခဲ့ပေမယ့် ပထမ အကျော့တုန်းက ရလဒ်ကြောင့် နှစ်ကျော့ပေါင်း ၂-၁ နဲ့ အင်တာကို အသာရကာ ကွာတားဖိုင်တယ်ကို တက်လှမ်းသွားခဲ့ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ကနေ ရာသီ အကုန်မှာ စာချုပ်ပြည့်ပြီး ထွက်ခွာ တော့မယ့် ဒိန်းမတ် နောက်ခံလူ ခရစ်ရှန်ဆန် ဟာ ဘိုင်ယန်မြုးနစ် ထက် ဘာစီလိုနာ ကို ရွေးချယ်ဖို့ စိတ်ကူး ထားပြီး ဖြစ်ကာ မကြာတော့တဲ့ ရက်အတွင်းမှာ စပိန် ကလပ် နဲ့ အကြို သဘောတူညီမှု ရယူဖို့ ရှိနေပြီလို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
မန်စီးတီး နောက်ခံလူ ကန်ဆယ်လို ဟာ ဖျားနာ နေတာကြောင့် စပို့တင်း နဲ့ ကစားမယ့် ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ် ကို လွဲချော်မယ်လို့ နည်းပြ ဂွာဒီယိုလာ က အတည်ပြု ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် မန်စီးတီး ဟာ အကီ ၊ ဒီယာ့စ် ၊ ဝေါ်ကာ နဲ့ ကန်ဆယ်လို တို့ မပါဝင်ဘဲ စပို့တင်း နဲ့ ကစားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ယူကရိန်း နောက်ခံလူ ဇင်ချန်ကို ကတော့ ဒီပွဲကို ဝင်ကစားဖို့ အဆင်သင့် ရှိနေပါတယ်လို့ ဂွာဒီယိုလာက ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ပရီးမီးယားလိဂ် ဟာ ရုရှ အခြေစိုက် ရုပ်သံ ထုတ်လွှင့်သူ ရမ်ဘလာ နဲ့ စာချုပ် ကို ရပ်ဆိုင်း ထားလိုက် တာကြောင့် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲတွေကို ရုရှ မှ တရားဝင် ပြသနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ဒါ့အပြင် ပရီးမီးယားလိဂ် ဟာ ယူကရိန်း ပြည်သူတွေ ကို ပေါင် ၁.၃ သန်း ကူညီ လှူဒါန်း သွားမယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
အင်္ဂလန် ဘောလုံး အကျော်အမော်ဟောင်း ဒေးဗစ် ဘက်ခမ်း နဲ့ မိသားစု ဟာ ယူကရိန်း က ဒုက္ခရောက်နေ သူတွေ အတွက် ပေါင် ၁ သန်း လှူဒါန်း ခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် အသင်းဟာ ချဲလ်ဆီး နဲ့ စာချုပ်သစ် ကိစ္စ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေပြီး နွေရာသီမှာ အလွတ်နဲ့ လမ်းခွဲဖွယ် ရှိနေတဲ့ ဂျာမန် နောက်ခံလူ ရူဒီဂါ ကို PSG နဲ့ အပြိုင် ကမ်းလှမ်းဖို့ စဉ်းစား နေပြီလို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် နယူးကာဆယ် ဟာ ရီးရဲမက်ဒရစ် မှာ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေတဲ့ ချဲလ်ဆီး တောင်ပံ ကစားသမားဟော်း အီဒင် ဟာဇက် ကိုလည်း နွေရာသီမှာ ကမ်းလှမ်းဖိ့ ပြင်ဆင် နေကြောင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
မန်စီးတီး ကနေ နွေရာသီမှာ ထွက်ခွာဖွယ် ရှိနေတဲ့ အယ်လ်ဂျီးရီးယား တောင်ပံ ကစားသမား မာရက်ဇ် ကို PSG နဲ့ ချဲလ်ဆီး အသင်းတို့က စောင့်ကြည့် နေကြတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
လိဒ် ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူဟောင်း အန်နီ မေးလ် က အက်စတွန် ဗီလာ တိုက်စစ်မှူး အိုလီ ဝက်ကင်းစ် ဟာ အာဆင်နယ် ရဲ့ ကစားပုံနဲ့ အံဝင်အောင် ကစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ပြောဆိုပြီး အင်္ဂလန် တိုက်စစ်မှူးကို အီးမရိတ် ထံ ခေါ်ယူဖို့ အကြံပြု သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် ဟာ ဖီနာဘာချီ အသင်းမှာ ကစားနေတဲ့ ၂၅ နှစ် အရွယ် တောင်ကိုရီးယား နောက်ခံလူ ကင်မင်ဂျေး ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စား နေပြီး စောင့်ကြည့် နေတယ်လို့ သတင်း ရရှိပါတယ် ။
မက္ကဆီကို အိုးပင်း တင်းနစ် ပြိုင်ပွဲမှာ ဒေါသထွက် ပေါက်ကွဲပြီး အော်ဟစ် ဆဲဆိုကာ ဒိုင်လူကြီး ( Umpire ) ရဲ့ ခြေထောက်ကို တင်းနစ် ရတ်ကတ် နဲ့ ထိခိုက်မိ စေခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ နံပါတ် ၃ တင်းနစ် သမား အလက်ဇန်းဒါး ဇက်ဗွီရက်ဗ် ကို ပေါင် ၁၉၀၀၀ ဒဏ်ငွေ ချမှတ် လိုက်ပြီး ၈ ပတ်ကြာ တင်းနစ် မကစားဖို့ တားမြစ် ပိတ်ပင် လိုက်တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းသားတွေဟာ မနေ့က လေ့ကျင့်ခန်း ပြန်လည် စတင် ခဲ့ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့ ပွဲကို မပါဝင် ခဲ့တဲ့ ကာဗာနီ ၊ ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို တို့လည်း လေ့ကျင့်ရေးကွင်းကို ပြန်ရောက်လာ ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ရိုနယ်ဒို ဟာ လေ့ကျင့်ရေး ကွင်းကနေ နောက်ဆုံးမှ ပြန်လည် ထွက်ခွာ သွားခဲ့ပြီး ၃၇ နှစ် ရောက်နေသည့်တိုင် အရင်တုန်းကလိုမျိုး အကြိုးစားဆုံး သူ အဖြစ် ရှိနေသေးကြောင်း ပြသ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူးလေး မားကပ် ရက်ဖိုဒ့် ကတော့ ပုံစံကောင်းတွေ မပြသ နိုင်တာကြောင့် အင်္ဂလန် အသင်းရဲ့ လာမယ့် နိုင်ငံ တကာ ပွဲစဉ်တွေ ကနေ ချန်လှပ် ထားခံ ရနိုင်တယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ယူကရိန်း ရဲ့ စကော့တလန် နဲ့ ကစားမယ့် ကမ္ဘာ့ဖလား Play-off ပွဲစဉ် ကို ဖီဖာ က ရွှေ့ဆိုင်း ပေးခဲ့ပြီး ဘယ်နေ့ ပြန် ကစားရမယ် ဆိုတာကို လာမယ့် ၄၈ နာရီ အတွင်း ဆုံးဖြတ် သွားမယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ဖီဖာ ဟာ ယူကရိန်း နဲ့ ရုရှ မှာ ကစားနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသား ဘောလုံးသမား နဲ့ နည်းပြတွေ ရဲ့ စာချုပ်တွေကို ယာယီ ဆိုင်းငံ့ ထားလိုက်ပြီး ဧပြီ ၇ ရက်နေ့ မှ ဇွန် ၃၀ အတွင်းမှာ အသင်းသစ် ပြောင်းရွှေ့ စာရင်းသွင်းဖို့ ကိုလည်း အထူး အခွင့်အရေး ပေးလိုက်တယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
Previous Article လီဗာပူးတို့ အင်တာကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်အတွင်း ဖာဘင်ညို လှည့်ဖျားမှုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲခဲ့တဲ့ အာဆင်၀င်းဂါးကို တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ယာဂန်ကလော့
Next Article ဘိုင်ယန် ရဲ့ ဂိုးမိုးရွာ နိုင်ပွဲနဲ့ အတူ ချန်ပီယံလိဂ် မှတ်တမ်းသစ်ကို ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ လီဝန်ဒေါ့စကီး